टंगालको आँखा छल्न भद्रकालीको बाटो !- विचार - कान्तिपुर समाचार
‘कहाँ जाई ? का करी ?’ सहरले पठाइसक्यो, गाउँ थेग्न तयार छैन । डिहमै कारोबार, रोजगारी र कमाइका साधनहरू खडा गर्न नसकिने होइन । त्यसो भएमा अर्थव्यवस्थालाई नयाँ तागत मिल्न सक्छ । कोरोना भाइरसले भासिँदै गएको विश्व अर्थव्यवस्थामाझ नेपाली समाज आफ्नै भुइँमा टेकेर जोगिन सक्छ । अहिलेको घरफिर्ती भनेको कमाउन बाहिरिनु र बिदामा फर्किनुजस्तो सामान्य क्रिया होइन । तर, जब सत्ताका नजरमा भुइँमान्छेहरू नागरिक कम, मतदाता बढी देखिन थाल्छन्, त्यतिखेर यी मन्थनहरू अरण्यरोदन मात्रै हुन जान्छन् । के गर्नु !
प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:३८